Khusela i-HTML indawo esuka kwi-Hackers usebenzisa i-Tips Handy From Semalt. Kuyinto Elula Njengo-ABC!
1. Gcina zonke iiSofthiwe zihlaziywe
U-Artem Abgarian, uMphathi weMatriki oPhumeleleyo kuMpumelelo iSemalt ,Ukholelwa ngokuqinile ukuba ukugcina isoftware yakho ihlaziywe yenye yezinto ezibalulekileyo eziza kukunceda ukukhusela iwebhusayithi kwiindawo ezihlasele.Ezinye iikhampani zikhupha ii-patches eziqhelekileyo kunye nezibuyekezo zokulungisa izigulane kunye neephene kwiiplagi zangaphambili. Ngokuqinisekisa ukuba bayalungisa nayiphi naizikhumba kunye nezimbobo kule khowudi, ezi nkampani zinciphisa umngcipheko wokuhlaselwa kwesoftware. Ngoko ke, nje kuphela ukuba isayithi iqinisekisa ukubainezixhobo eziphambili ezikuxhasayo, kuqinisekiswa ngeempawu ezifanayo zokhuseleko. Kuyafana nakwabanikazi beewebhusebenzisa iifowuni zeqela lesithathu - kansas city website development. Omnye kufuneka aqinisekise ukuba alandele ukuhlaziywa kwawo kwaye aqinisekise ukuba ahlala ahlaziywa naliphi na ixesha elinye. Indawoumnini ufuna ukucima naziphi na iiplagi ezingasetyenziswanga okanye eziyimfuneko njengoko zikhonza njengezango zokuhlala, abagxeki abanokuzifumana kunyebenzisa ukuhlaselwa.
2. Ukwakha iziseko zoKhuseleko kwiSayithi
Umgca wokuqala wokukhusela kwiwebhusayithi yiWebhu ye-Firewall yesicelo.Injongo yalo kukuhlola nayiphi na i-traffic engenayo kwaye ifake iifowuni nasiphi na isicelo esolisayo. Ekugqibeleni, isayithi ihlala ifikelele ekuhlaselweni kwe-cyberkunye nogaxekile. Kwixesha elidlulileyo, iWeb Application Application Firewalls yayisekhompyutheni yeekhompyutha. Nangona kunjalo, iinkampani zokhuseleko-njengenkonzo(Ii-SECaaS) ziye zasebenzisa itheknoloji yefu njengendlela ephantsi yokubonelela ngekhuseleko lewebhu, elifunyenwe ngaphambili kwi-setups ye-enterprise kuphela.Ngeteknoloji yefu, nayiphi na inkampani inokuqasha "i-Firewall yesicelo sewebhu" ngaphandle kokufaka iindleko ezongeziweyo ezifana nokuzinikezelau mncedisi. Ezi nkonzo zeplagi-neyokudlala ziye zazenzekelayo iinkqubo ezenza iinkqubo eziyimfuneko egameni lomnini. EziI-Fire Application Firewalls efakwe kwifufu igcwalisa indawo engeyiyo apho umnye umboneleli osilelayo ehluleka..
3. Shintshela kwi-HTTPS
I-Hyper Text Protocol ekhuselekileyo ngumgaqo-nkqubo wokunxibelelwano okhuselekileyo osetyenziselwa ukutshintshiselanaulwazi olwangasese okanye olubukhali. Ukusebenzisa inkonzo ye-HTTPS ukwenza unxibelelwano phakathi kwewebhu kunye nesiphequluli kuthetha ukudibanisa okongeziweyoUluhlu lokubhala ngokubhekiselele kwiKhuseleko loKhuseleko lweThutho (TLS) okanye iSock Sockets Layer (SSL). Kuyinzuzo eyongeziweyo kumnini njengokouyabakhusela kwimizamo yokuqhawula, kunye newebhusayithi njengoko ibonisa abasebenzisi ukuba ishishini lizinikezele ekukhuseleni ulwazi lwabo.
Zonke iintengiso ze-Intanethi ziqhutywe kwi-platform ye-HTTPS. Intsalela yewebhusayithi yileHTTP ngokusilelayo. Nangona kunjalo, oku kungashintsha njengoko i-Google yatsho nje ukuba iza kuqalisa ukusebenzisa i-HTTPS njengento yokukhangela, okuya kuthiKuthetha ukuba ezininzi iiwebhusayithi ziza kutshintsha kunye nethemba lokuphucula indawo yazo kwi-SERP.
4. Sebenzisa iiPhasiwedi eziqinileyo kwaye ziguqule rhoqo
Kukho ukwanda okwesabisayo kwinani lokuhlaselwa kwamagunya okuxhatshazwa asetyenziswa ngabaduniuzame ukuqikelela ukuba uphasiwedi womsebenzisi. Enye indlela yokuzikhusela kuloo ndlela kukusetyenziswa kweephasiwedi eziqinileyo nezizodwa. Kufunekaukuba nale mijelo isetyenziswe kumlawuli, ii-server kunye neephasiwedi ze-database. Omnye kufuneka enze iphasiwedi eyenza ukuyisebenzisaabalinganiswa abahlukeneyo, ubuncinane ubuncinane beibali ezili-12. Ekugqibeleni, abasebenzisi kufuneka batshintshe amaphasiwedi kwiindawo ezahlukahlukeneyo ukuqinisekisa ukuba iphindwe kabiniekhuselekile. Iiphasiwedi ezichanekileyo zisebenza kangcono njengoko kwenza kube nzima kubagculi ukuba bafumane iphasiwedi emva kokuba baphulaphule ngokuphumelelayo.
5. Yenza Izalathisi Yomlawuli I-Tough To Spot
Abahlaseli bahlasele iirejista zenkcazelo ukufumana idatha ephathelene nesayithi. Ngokusebenzisaizikripthi ezikhawulela kule datha, ukugxilwa kwabo kugxininisa ukuzama ukungena kwiifolda eziqulethwe khona ukuze ziphazamise ukhuseleko. Iwebhusayithiumnini makaqinisekise ukuba amagama asetyenziswa kwiilawulwazi ayaziwa kuphela kwi-webmasters kuphela.